Golaha wasiirada Somalia oo soo gabagabeeyay kulan labo malain qaatay oo ay uga hadlayeen Xaalada Dalka – Radio Muqdisho
Golaha wasiirada Somalia oo soo gabagabeeyay kulan labo malain qaatay oo ay uga hadlayeen Xaalada Dalka
Shirkaan Golaha wasiirada labada maalin uga socday Magaalada Muqdisho ayaa waxaa looga hadlayay Dar Dar galinta Howlaha horyaala Xukuumada Somalia iyo kor u qaadista Dadaalada Dowladu ku dooneyso in Dalka ay ku xasiliso.
Qorshayaasha Boqolka Maalin ee soo socota Xukuummadda Somalia ayaa ahaa waxyaabaha sida gaarka ah ay Uga doodayeen Wasiradu labadii maalin ee uu socda shirku Ra,iisul wasaaraha Jamhuuriyada Federaalka ah Ee Somalia Mudane Cumar cabdi Rashiid Cali Sharmaake ayaana shir gudoominayay shirka isagoo u sheegay Wasiirada in loo baahan yahay 100 maalin ee soo socota in wax la taaban karo la qabto.
Afhayeenka Xukuumada Ridwaan Xaaji cabdiwali ayaa Markii uu soo dhamaaday shirku Saxaafada Faah faahin siiyay isagoo sheegay in Goluhu ika dooday arimo dhowr ah isla markaana la isla gartay in dardar la galiyo howlaha horyaala Xukuumada 100 ka maalin ee soo socotana ay noqoto maalmo wax badan la qabto is badal lagu sameeyo Howlo badan.
Hindise sharciyeeedyada Wasaarada cadaalada sidii loo dhameeestiri lahaa oo loo dhisilahaa Gudiga adeeega Garsoorka ayaa qayb ka ahayd waxyaabaha kulanka golaha wasiirada looga hadlay labadii maalin ee uu socday shirku afhayeeenka xukuumada ayaa mar kale sheegay in arintaas Goluhu ka dooday wasaarad kastana sidaas oo kale laga doonayo in hindise sharciyeedkeeda ay dhameestirto.
Dhageyso Warka Habeen ee Radio Muqdisho 16 03 2015